आइतबार अगस्त 1, 2021 |
आइतबार अगस्त 1, 2021
विषय — माया
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: रोमी 13 : 10
“"यसकारण प्रेम गर्नु नै सबै व्यवस्थाको पालन गर्नु हो।"”
उत्तरदायी पढाइ: भजनसंग्रह 119 : 97, 114, 117, 127, 133, 165
97 हे परमप्रभु! म तपाईंका व्यवस्थालाई माया गर्छु। म त्यसको विषयमा सदाकाल भन्ने गर्छु।
114 मलाई लुकाउनु होस् र रक्षा गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईंले भन्नु भएका प्रत्येक कुरामा म भरोसा गर्छु।
117 मलाई साथ दिनुहोस, परमप्रभु र म जोगिने छु। म तपाईंका आज्ञाहरू अनन्त सिक्ने छु।
127 हे परमप्रभु, म खाटी सुन भन्दा पनि तपाईंको आज्ञाहरू मन पराउँछु।
133 हे परमप्रभु, तपाईंले कसम खाए झैं मलाई डोर्याउनु होस् मतर्फ कुनै प्रकारको दुर्घटना घट्न नदिनुहोस्।
165 मानिसहरू जसले तपाईंको उपदेश मन पराउछन् तिनीहरू साँचो रूपमा शान्तिमा पुग्दछन्। केहीले पनि तिनीहरू पतन गराउन सक्दैन।
1. यहोशू 22 :5(लिनुहोस्)
5 … याद राख-त्यो नियम पालन गर्नु पर्छ जो मोशाले तिमीहरूलाई दिएका थिए। तिमीहरूले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु पर्छ अनि उहाँका आज्ञाहरूको सदा-सर्वदा पालन गर्नु पर्छ। तिमीहरूले लगातार अनुसरण अनि लगातार उत्तम प्रकारले उहाँको सेवालाई जारिराख्नु पर्छ।
2. रूथ 1 : 1,2(से 3rd ,), 3-6, 8,9(त्यसो भए)-11 (से 1st ,), 12 (से .), 14 (से :), 16, 19 (से.)
1 धेरै अघि न्यायकर्त्ताहरूले शासन गरेको समयमा त्यहाँ नराम्रो समय थियो जब खानका निम्ति पर्याप्त खाद्य थिएन। एलीमेलेक नाउँका एक व्यक्तिले बेतलेहेम, यहूदा छाडे। तिनी, तिनकी पत्नी अनि दुइजना छोराहरू मोआबको पार्वत्य देशमा बसाँई सरेर गए।
2 त्यो मानिसको नाउँ एलीमेलेक थियो अनि त्यो मानिसको पत्नीको नाउँ नाओमी थियो अनि दुइ छोराहरूको नाउँ महलोन र किल्योन थियो।
3 पछि, नाओमीको पति एलीमेलेकको मृत्यु भयो। यसर्थ नाओमी अनि तिनका दुइ छोराहरू मात्र रहे।
4 तिनका छोराहरूले मोआब देशकी स्त्रीहरूसँग बिवाह गरे। एक जनाको पत्नीको नाउँ ओर्पा अनि अर्कोकी पत्नीको नाउँ रूथ थियो। तिनीहरू मोआबमा लग-भग दशवर्ष बसे।
5 अनि महलोन र किल्योनको पनि मृत्यु भयो। यसर्थ आफ्ना पति अनि दुइ छोराहरू बिना नाओमी एक्ली भइन्।नाओमी घर जान्छिन्
6 नाओमीले मोआबको खेतहरूमा हुँदा परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई सहायता गर्नु भएको थियो भन्ने सुनिन्। उहाँले यहूदामा आफ्ना मानिसहरूलाई भोजन दिनु भएको थियो। यसर्थ नाओमीले मोआबको खेतहरू छाडी आफ्नो घर फर्किने निश्चय गरिन्। तिनकी बुहारीहरूले पनि तिनीसित जाने निश्चय गरे।
8 तब नाओमीले आफ्ना बुहारीहरूलाई भनिन्, तिमीहरू दुबै आफ्नी आमाको घर फर्केर जानसक्छौ। तिमीहरूले म अनि मेरा मृत छोराहरू प्रति दया गर्यौ। यसर्थ परमप्रभु तिमीहरू प्रति त्यस्तै दयावान रहून् भनी म प्रार्थना गर्छु।
9 नाओमीले आफ्ना बुहारीहरूलाई म्वाई खाईन अनि ती सबै रून थाले।
10 तब ती बुहारीहरूले भने, तर हामी तपाईंसित तपाईंको कुलमा नै जान चाहन्छौं।
11 तर नाओमीले भनिन्।
12 घर फर्की जाऊ। नयाँ पतिसित विवाह गर्नका निम्ति म बृद्धा भइसकेकी छु।
14 यसर्थ ती स्त्रीहरू फेरि एकदमै रोए। तब ओर्पाले नाओमीलाई म्वाई खाईन अनि गइन्। तर रूथले तिनलाई अंगालो हालिन र छोडिनन्।
16 तर रूथले भनिन्, तपाईंलाई छाडन मलाई कर नलगाउनु होस्। मलाई मेरा मानिसहरू तर्फ फर्किर जान कर नगर्नु होस्। मलाई तपाईंसित नै जानदिनु होस्। तपाईं जहाँ जानुहुन्छ, म त्यहीं जानेछु। तपाईं जहाँ सुत्नु हुन्छ, म त्यहीं सुत्नेछु। तपाईंका मानिसहरू मेरा मानिसहरू हुनेछन्। तपाईंका परमेश्वर मेरा परमेश्वर हुनेछन्।
19 नाओमी र रूथ बेतलेहेम शहर आई नपुगेसम्म यात्रा गरे।
3. रूथ2: 1,2(से 1st .), 5, 6, 8-12
1 तलेहेममा एकजना धनी मानिस थिए। तिनको नाउँ बोअज थियो। बोआज नाओमीका एलीमेकका परिवारका नजिकका आफन्तहरू मध्ये एक थिए।
2 एकदिन रूथले (मोआबी स्त्री) नाओमीलाई भनिन्, म खेतहरूतिर जानलाई सोच्दैछु। हुन सक्छ म कसैलाई भेट्ने छु जो म प्रति दयालु हुने छन् अनि उनले आफ्नो खेतमा अन्न मलाई सिला गर्न दिनेछन्।
5 तब बोअजले तिनका सेवक जो कामदारको नाईकेसँग कुरा गरे र सोधे, त्यो कसकी छोरी हो?
6 ती नोकरले उत्तरदिए, यी मोआबी स्त्री हुन जो मोआबको खेतहरूबाट नाओमीसित आएकी छिन्।
8 तब बोअजले रूथलाई भने, सुन नानी। आफ्नो निम्ति अन्न संग्रह गर्न यहाँ मेरो खेतमा बस। तिमीलाई अरू मानिसको खेतमा जान खाँचो छैन। मेरा स्त्री खेतालाहरूको पिछा गर।
9 कुन खेतमा तिनीहरू जान्छन् हेर अनि तिनीहरूलाई पछ्याऊ। तिमीलाई दिक्दारी नदिनु भनी मैले जवान मानिसहरूलाई चेतावनी दिएको छु। जब तिमीलाई तिर्खा लाग्छ, मेरा मानिसहरूले पानी पिउने घैलाबाट नै पिउनु।
10 तब रूथले भूइँ तिर निहुरिएर शिर झुकाइन्। तिनले बोअजलाई भनिन्, मलाई आश्चर्यलाग्यो तपाईंले मलाई ध्यानदिनु भयो। म एक नौली महिला हुँ। तर तपाईंले मलाई खूबै दया गर्नु भयो।
11 बोअजले तिनलाई उत्तर दिए, “तिमीले नाओमी, तिम्री आमालाई सहायता गरेको विषयमा मलाई सबै थाहा छ। म जान्दछु तिम्रा पतिको मृत्यु भएपछि पनि तिमीले उनलाई सहायता गर्यौ। अनि म जान्दछु कि तिमीले आफ्ना पिता-माता एवं आफ्नै देश पनि त्याग गर्यौ र यस देशमा आयौ। तिमीले यस देशका कुनै व्यक्तिलाई चिन्दैन थियौ, तर तिमी नाओमी सित यहाँ आयौ।
12 तिमीले गरेका सबै असल कुराको निम्ति परमप्रभुले तिमीलाई पुरष्कृत तुल्याउनु हुनेछ। इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरले तिमीलाई प्रशस्त दिनुहुनेछ। तिमी उहाँ कहाँ सुरक्षाको निम्ति आयौ अनि उहाँले तिम्रो सुरक्षा गर्नु हुनेछ।
4. सपन्याह3: 17
17 परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ एकजना शक्तिशाली सैनिक जस्तै हुनुहुन्छ। उहाँले तिम्रो रक्षा गर्नु हुनेछ। उहाँले तिमीलाई कति प्रेम गर्नु हुन्छ सो उहाँले देखाउनु हुन्छ। तिमीसित उहाँ कति प्रसन्न हुनुहुन्छ। उहाँ हाँस्नु हुनेछ अनि तिम्रो बिषयमा अतिनै प्रसन्न रहनुहुनेछ।
5. रोमी 13 : 8, 10
6. गलाती5: 14
14 सम्पूर्ण व्यवस्ता यही एक आदेशमा समेटिएको छः आफूले आफूलाई जस्तो प्रेम गर्छौ त्यस्तै प्रेम अरूलाई पनि गर।
7. 1 यूहन्ना4: 7, 8, 10 (से 3rd ,), 11, 12, 16, 18, 19, 21
8. 1 यूहन्ना 5:3(से :)
3 परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुको अर्थ उनको आदेशहरु पालन गर्नु हो।
हामीलाई प्रेमको कानून संग आश्वासन दिनुहोस्।
ईश्वरीय प्रेम जहिले पनि मिलेको छ र सधैं सबै मानवीय आवश्यकतालाई पूरा गर्दछ। यो कल्पना गर्नु ठीक होइन कि येशूले केवल ईश्वरीय शक्ति केवल एक निको संख्या वा सीमित समयावधिका लागि प्रदर्शन गर्नुभयो, किनकि सम्पूर्ण मानिसजातिलाई र हरेक घण्टामा ईश्वरीय प्रेमले सबै असल थोकहरू प्रदान गर्दछ।
अनुग्रहको चमत्कार प्रेम गर्न कुनै चमत्कार हो।
परमेश्वर र मानिसप्रतिको प्रेम दुबैलाई निको पार्ने र सिकाउने कार्यमा साँचो प्रोत्साहन हो। प्रेमले प्रेरणा दिन्छ, प्रकाश पार्छ, पदनाम दिन्छ, र मार्गमा डो .्याउँछ। सही अभिप्रायले सोचाइ, र शक्ति र बोली र कार्यलाई स्वतन्त्रता दिन्छ। सत्य सत्यको बेदीमा प्रेम पुजारी हुन्छ। ईश्वरीय प्रेमको लागि धैर्यतापूर्वक कुर्नुहोस् प्रतीकात्मक मनको पानीमा हिंड्न, र सिद्ध अवधारणाको रूपमा। धैर्यता "उनको पूर्ण काम" हुनुपर्दछ।
ईश्वरीय प्रेम, जसले अहानिकारक विषालु विषापा बनायो, जसले मानिसहरूलाई उमालेको तेलबाट, आगोको भट्टीबाट, सिंहको ब गाराबाट बचाउँथ्यो, बिरामीहरूलाई हरेक युगमा निको पार्छ र पाप र मृत्युमाथि विजयी हुन सक्छ। यसले येशूका प्रदर्शनहरूलाई निस्सन्देह शक्ति र प्रेमले ढाक्यो। तर उही "दिमाग ... जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो" जहिले विज्ञानको पत्रको साथ साथ भविष्यवक्ताहरू र प्रेरितहरूको पुरानो प्रदर्शनहरूको पुष्टि र दोहोर्याउन आवश्यक छ।
यो भनिएको छ, र साँच्चिकै, कि इसाई धर्म विज्ञान हुनुपर्दछ, र विज्ञान ईसाई धर्म हुनुपर्दछ, अन्यथा एक वा अर्को झुटो र बेकार हो; तर न त महत्वहीन वा असत्य छ, र ती प्रदर्शनमा एक जस्तै छन्। यो एक अर्कोसँग समान हुनको लागि प्रमाणित गर्दछ। येशुले सिकाउनुभए जस्तै इसाईमत कुनै पनि धर्म वा रीतिथिति थिएन, र कुनै रीतिथितिवादी परमप्रभुबाट विशेष उपहार थिएन; तर यो ईश्वरीय प्रेमले गल्ती गरेको र बिरामीहरूलाई निको पार्ने, केवल ख्रीष्ट वा सत्यको नाममा मात्र नभई सत्यको प्रदर्शनमा प्रदर्शन भएको थियो जुन ईश्वरीय ज्योतिको चक्रमा हुनुपर्दछ।
यो इसाई विज्ञानको शिक्षा हो: कि ईश्वरीय प्रेम यसको अभिव्यक्ति, वा वस्तुबाट वञ्चित हुन सक्दैन; त्यो खुशीलाई दु: खमा बदल्न मिल्दैन, किनकि शोक आनन्दको मालिक होइन। त्यो खराबीले कहिल्यै खराबी गर्न सक्दैन। त्यो कुराले कहिले पनि मन उत्पन्न गर्न सक्दैन र जीवनको परिणाम मृत्यु हुन सक्दैन। सिद्ध मानिस - परमेश्वरद्वारा शासित, उहाँको सिद्ध सिद्धान्त - पापरहित र अनन्त छ।
सत्य र त्रुटिबीचको अनुमानात्मक युद्ध भनेको केवल इन्द्रियको साक्ष्य र भौतिक इन्द्रियको गवाही बीचको मानसिक द्वन्द्व हो, र आत्मा र शरीरबीचको यो युद्धले विश्वास र ईश्वरीय प्रेमको समझबाट सबै प्रश्नहरूको समाधान गर्दछ।
स्वर्गले सद्भावलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, र ईश्वरीय विज्ञानले स्वर्गीय सद्भावको सिद्धान्तको व्याख्या गर्दछ। मानव आश्चर्यको निम्ति महान चमत्कार भनेको ईश्वरीय प्रेम हो र मानिसमा स्वर्गको राज्यको स्थापना गर्ने कुराको साँचो धारणा भनेको अस्तित्वको विशाल आवश्यकता हो। यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिदैन जबसम्म हामी हाम्रो छिमेकीलाई घृणा गर्छौं वा कसैलाई गलत अनुमान लगाउँदछौं जसलाई भगवानले उहाँको वचन सुन्न नियुक्त गर्नुभएको छ।
9. 367 : 3-10 (से 2nd ,)
कोमल शब्द र उनको डर संग एक अमान्य, दयनीय धैर्य को ईसाई प्रोत्साहन र उनीहरुलाई हटाउने, सिद्धान्तहरु को कवच भन्दा राम्रो छ, कट्टरपन्थी उधारो भाषण, र वैधानिक ईसाई विज्ञान मा यति धेरै प्यारोडी हो जो तर्क, को डोलिंग। ईश्वरीय प्रेम संग आगो।
सत्यको खोजी गर्नु भनेको यही हो।
हाम्रो प्रगति निश्चित गर्न हामीले हाम्रो स्नेह कहाँ राखिएको छ र जसलाई हामी भगवानको रूपमा स्वीकार्छौं र आज्ञाकारी हुन्छौं भनेर सिक्नै पर्छ। यदि ईश्वरीय प्रेम हाम्रो नजिक हुन्छ, प्रिय र अधिक वास्तविक हुँदै जान्छ, त्यसपछि कुरा आत्माको अधीनमा हुन्छ। हामीले अनुसरण गर्ने वस्तुहरू र हामीले प्रकट गर्ने आत्माले हाम्रो दृष्टिकोण प्रकट गर्दछ, र हामी के जित्दैछौं भनेर देखाउछ।
सत्यको अमर विचार शताब्दीयौंदेखि व्यापक रूपमा फैलँदैछ, यसको पखेटामुनि बिरामी र पापीहरू जम्मा गर्दै। मेरो थकित आशाले त्यो खुशीको दिनलाई बुझ्ने कोशिस गर्दछ, जब व्यक्तिले ख्रीष्टको विज्ञानलाई चिन्नेछ र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्दछ - जब उसले परमेश्वरको सर्वशक्तिमानता र ईश्वरीय प्रेमको च गाइ गर्ने शक्तिलाई थाहा पाउनेछ जुन उसले गरेको छ र मानिसजातिको लागि गरिरहेको छ। । प्रतिज्ञाहरू पूरा हुनेछन्। ईश्वरीय उपचार को पुन: देखा को लागी समय सँधै समय हो; र जसले आफ्नो पार्थिव सबै ईश्वरीय विज्ञानको बेदीमा राख्छ, उसले अब ख्रीष्टको कचौराबाट पिउँछ, र मसीही निको पार्ने आत्मा र शक्तिले पोषित छ।
क्रिश्चियन विज्ञान र ईश्वरीय प्रेमको शक्ति सर्वशक्तिमान छ। यो पक्रिराख्न र रोग, पाप, र मृत्युलाई नष्ट गर्न वास्तवमा पर्याप्त छ।
सबै भक्ति को तत्व ईश्वरीय प्रेम को प्रतिबिंब र प्रदर्शन हो, रोग निको पार्छ र पापलाई नष्ट गर्दछ। हाम्रो गुरुले भने, "यदि तपाईंले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने, मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नुहोस्।"
एकको लक्ष्य, विश्वास भन्दा परको कुरा, सत्यको पाइलाहरु, स्वास्थ्य र पवित्रताको बाटो पत्ता लगाउनु पर्छ।
अर्को शब्दमा: हामी यस पूरै कुराको निष्कर्ष सुन्नेछौं: परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहोस् र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नुहोस्: किनकि यो सारा मानिस आफ्नै स्वरूपमा र समानतामा छ। ईश्वरीय प्रेम असीम छ। त्यसकारण सबै कुरा वास्तवमै परमेश्वरमा र परमेश्वरमा रहेको छ र उहाँको प्रेम प्रकट गर्दछ।